Ny resaka momba ny fiarovana an-dranomasina dia tsy maintsy ahitana ny zon'olombelona: Q&A miaraka amin'ny biolojista Vivienne Solís Rivera - Blue Ventures
Fandrakofana ao Mongabay amin'ny taratasy misokatra misolo tena ny fampidirana ny zon'olombelona ao anatin'ny Rafitra Post-2020 momba ny zavamananaina. Nanadihady an'i Vivienne Solís Rivera, solontenan'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona sy mpiaro ny zon'olombelona ao Costa Rica, CoopeSoliDar, momba ny taratasy misokatra sy ny zon'ny mpanjono madinika i Mongabay.
“Manahy manokana izahay ho an'ireo firenena izay tsy nahazoana alalana maimaim-poana, mialoha ary tsy nahazoana alalana. Ohatra, raha ny momba an'i Costa Rica, dia tsy vita izany. Tsy noresahina tamin'ny vondrom-piarahamonina mpanjono io fitomboan'ny faritra arovana io.
Miady ihany koa izahay mba hitazonana ny hevitra momba ny jono maharitra sy ny fampiasana maharitra ny harena an-dranomasina. Ny rariny ara-tsosialy dia tokony ho fototry ny fiarovana; tokony homena lanja mazava ny olona efa manome fahalalana sy ezaka nentin-drazana ho amin’ny fiarovana ny harena an-dranomasina. Heverinay fa ny vazimba teratany sy ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana (IPLC) no mpitahiry ny ankamaroan'ny harena an-dranomasina, ary tokony [hanaiky] izany ny governemanta,” hoy i Solís Rivera nanazava tamin'ny tafatafa.
Hamaky bebe kokoa: 'Ny resaka momba ny fiarovana an-dranomasina dia tsy maintsy ahitana ny zon'olombelona': Q&A miaraka amin'ny biolojista Vivienne Solís Rivera nataon'i Kimberley Brown ho an'ny Mongabay, 28 martsa 2022.
30 × 30, Decolonise Conservation, Zon'olombelona, Vazimba teratany